Wasiirka arrimaha debadda Soomaaliya oo kulmay Safiirrada Turkiga iyo Sweden – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Dr. Abdirahman Dualeh Beileh ayaa la kulmay danjiraha dowladda Turkey u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Cemalettin Kani Torun, oo ay ka wada hadleen xoojinta Xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya labada dal .
Kulankani ayaa waxaa si qoto dheer loogu falan-qeeyay horumarinta xiriirka Soomaaliya iyo Turkey, oo ah xoojinta iyo dardar gelinta howlaha wadaaga ah ee ka shaqeynaya danaha labada shacab ee walaalaha ah, waxaana xusid mudan in dowladda Turkiga oo ah saaxiibka runta ah ee Soomaaliya ay ka fulisay wadanka howlo gargaar bani’aadanimo, mashaariic horumarin oo la xiriira dib u dhiska waddooyinka, caafimaadka, waxbarashada iyo taageero joogto ah oo dhinacyo badan leh oo ay u fidisay dowladda Federaalka Soomaaliya.
Kulankani oo si heer sare ah u dhacay ayaa ku soo idlaaday jawi farxad iyo reynreyn leh.
Dowladda Turkiga ayaa si weyn uga qeyb qaadata amuuraha kala duwan ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhismaha wadooyinka Muqdisho iyo Howlaha Gar-gaarka.
Dhanka kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda Abdirahman Dualeh Beileh ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Sweden u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Mikael Lindvall oo ay ka wada hadleen xiriirka Soomaaliya iyo Sweden iyo qaabka lagu horumarin karo, laguna xoojin karo iskaashiga wadaaga ah ee labada dal u dhaxeeya.
Kulankani oo sidoo kale looga hadlay qodobo kala duwan oo ay ku jirto balaarinta iyo kobcinta iskaashi dhinacyo badan leh oo labada dal ay yeeshaan, taasoo qeyb ka ah taageeridda dowladda Federaalka Soomaaliya iyo furidda xarumo xirfado shaqo loogu abuuro dhalinyarada, si loo hakiyo u adeegsiga da’yarta iyo dhalinta soo koreysa colaada iyo dagaalada, loona suura-geliyo u saldhigidda nabadda iyo deganaanshaha dalka.